စစ်ကိုင်းမြို့ မြို့မဈေးကြီး၏ ၂၄ နာရီပျံကျဈေးအတွင်းဓားထိုးမှုဖြစ်ပွား - MM Live News
စစ်ကိုင်း ဇွန် ၃စစ်ကိုင်းမြို့ မြို့မဈေးကြီး၏ ၂၄ နာရီပျံကျဈေးအတွင်းဓားထိုးမှုဖြစ်ပွား။
စစ်ကိုင်းမြို့ မြို့မဈေးကြီး၏ ၂၄ နာရီပျံကျဈေးအတွင်း ဇွန် ၃ ရက်နေ့နံနက် ၆ နာရီက ဓားထိုးမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားရာ ဓားထိုးခံရသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုးံခဲ့ကြောင်းသိရသည် ။
စစ်ကိုင်းမြို့ မိုးဇာရပ်ကွက်မြို့မဈေးကြီး၏ ၂၄ နာရီပျံကျဈေးဆိုင်တန်းဓားထိုးမှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းအရ မြ်ို့မစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးခိုင်စိုးထွန်းနှင့်အဖွဲ့ မိုးဇာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းဝေနှင့်အဖွဲ့တိုသည် သက်သေများ….
နှင့်အတူသွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ ပျံကျဈေးတန်းတွင် အမဲသားရောင်းသည့် မဇင်မာဝင်း( ခ) မိမဲ အသက် ၃၂ နှစ် (ဘ) ဦးကိုဦးမွတ်စလင်/အစ္စလာမ် ပန်းဘဲတန်းရပ် စစ်ကိုင်းမြို့နေသူသည် ရင်ညွန့်/ ဝမ်းဗိုက်/ဝဲပေါင်ရင်း
/လည်ဂုတ်/ထိုးသွင်းဒဏ်ရာများ ဝဲတံတောင်/အောက်နှုတ်ခမ်းပြတ်ရှဒဏ်ရာများဖြင့် လဲကျနေသည်ကိုတွေရှိရ၍ သုခကာရီလူမှုကူညီရေးအသင်းသို့ အကြောင်းကြားပြီး လူမှူကူညီရေးအသင်းကားဖြင့် စစ်ကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်စဉ် လမ်း၌သေဆုးံသွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သေဆုးံသူ မဇင်မာဝင်း(ခ)မမိမဲသည် ၂၄ နာရီပျံကျဈေး၌ ဈေးရောင်းနေစ……
လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ခန့်ကကွာရှင်းပြီးဖြစ်သောသေဆုးံသူ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ စိုးနိုင်ဦး(ခ)ကုလားအသက် ၃၃ နှစ် (ဘ) ဦးဇော်မင်းl ၅/စကန(နိုင်) ၂၅၇၄၁၁ l ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ l ၅ တန်း ၊ အမဲသားသတ်လုပ်ငန်း၊ မိုးဇာရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်နေသူမှ ရောက်ရှိလာပြီး တစ်ယောက်တစ်ခွန်းစကားများကာ အသင့်ပါလာသည့် အမဲသားလှီးရာတွင် အသုးံပြုသည့် စတီးဓားဦးချွန်ဖြင့် ထိုးရာဒဏ်ရာများရရှိပြီး သေဆုးံသွားခဲ့သ ဖြင့် လူအားဒဏ်ရာ ရရှိသေဆုးံအောင်ပြုလုပ်သူ စိုးနိုင်ဦး(ခ) ကုလားအား မိုးဇာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသိန်းဝေမှ တရားလိုပြုလုပ်၍တိုင်တန်းရာ မမစ(ပ) ၆၁၅/ ၂၀၁၉ ရာဇသတ်ုကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ အရ အမှူဖွင့်အရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်းသိရသည် ။
စဈကိုငျး ဇှနျ ၃စဈကိုငျးမွို့ မွို့မစြေးကွီး၏ ၂၄ နာရီပြံကစြေးအတှငျးဓားထိုးမှုဖွဈပှား။
စဈကိုငျးမွို့ မွို့မစြေးကွီး၏ ၂၄ နာရီပြံကစြေးအတှငျး ဇှနျ ၃ ရကျနနေံ့နကျ ၆ နာရီက ဓားထိုးမှုတဈခုဖွဈပှားရာ ဓားထိုးခံရသူအမြိုးသမီးတဈဦးသဆေုးံခဲ့ကွောငျးသိရသညျ ။
စဈကိုငျးမွို့ မိုးဇာရပျကှကျမွို့မစြေးကွီး၏ ၂၄ နာရီပြံကစြေးဆိုငျတနျးဓားထိုးမှုဖွဈပှားကွောငျးသတငျးအရ မျွို့မစခနျးမှူး ဒုရဲမှူးခိုငျစိုးထှနျးနှငျ့အဖှဲ့ မိုးဇာရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးသိနျးဝနှေငျ့အဖှဲ့တိုသညျ သကျသမြေား….
နှငျ့အတူသှားရောကျကွညျ့ရှုစဈဆေးရာ ပြံကစြေးတနျးတှငျ အမဲသားရောငျးသညျ့ မဇငျမာဝငျး( ခ) မိမဲ အသကျ ၃၂ နှဈ (ဘ) ဦးကိုဦးမှတျစလငျ/အစ်စလာမျ ပနျးဘဲတနျးရပျ စဈကိုငျးမွို့နသေူသညျ ရငျညှနျ့/ ဝမျးဗိုကျ/ဝဲပေါငျရငျး
/လညျဂုတျ/ထိုးသှငျးဒဏျရာမြား ဝဲတံတောငျ/အောကျနှုတျခမျးပွတျရှဒဏျရာမြားဖွငျ့ လဲကနြသေညျကိုတှရှေိရ၍ သုခကာရီလူမှုကူညီရေးအသငျးသို့ အကွောငျးကွားပွီး လူမှူကူညီရေးအသငျးကားဖွငျ့ စဈကိုငျးမွို့နယျပွညျသူဆေးရုံသို့ပို့ဆောငျစဉျ လမျး၌သဆေုးံသှားခဲ့သညျ။
ဖွဈစဉျမှာ သဆေုးံသူ မဇငျမာဝငျး(ခ)မမိမဲသညျ ၂၄ နာရီပြံကစြေး၌ စြေးရောငျးနစေ……
လှနျခဲ့သော ၂ ရကျခနျ့ကကှာရှငျးပွီးဖွဈသောသဆေုးံသူ၏ခငျပှနျးဖွဈသူ စိုးနိုငျဦး(ခ)ကုလားအသကျ ၃၃ နှဈ (ဘ) ဦးဇျောမငျးl ၅/စကန(နိုငျ) ၂၅၇၄၁၁ l ဗမာ/ ဗုဒ်ဓ l ၅ တနျး ၊ အမဲသားသတျလုပျငနျး၊ မိုးဇာရပျကှကျ၊ စဈကိုငျးမွို့နယျနသေူမှ ရောကျရှိလာပွီး တဈယောကျတဈခှနျးစကားမြားကာ အသငျ့ပါလာသညျ့ အမဲသားလှီးရာတှငျ အသုးံပွုသညျ့ စတီးဓားဦးခြှနျဖွငျ့ ထိုးရာဒဏျရာမြားရရှိပွီး သဆေုးံသှားခဲ့သ ဖွငျ့ လူအားဒဏျရာ ရရှိသဆေုးံအောငျပွုလုပျသူ စိုးနိုငျဦး(ခ) ကုလားအား မိုးဇာရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးဦးသိနျးဝမှေ တရားလိုပွုလုပျ၍တိုငျတနျးရာ မမစ(ပ) ၆၁၅/ ၂၀၁၉ ရာဇသတျုကွီးပုဒျမ ၃၀၂ အရ အမှူဖှငျ့အရေးယူနိုငျရေးဆောငျရှကျလြှကျရှိကွောငျးသိရသညျ ။